Sekuqalile ukubhalisela umjajo we-Mandela Marathon | News24
Sekuqalile ukubhalisela umjajo we-Mandela Marathon
SEKUQALILE ukubhalisela komjaho waminyaka yonke owaziwa ngeMandela Marathon nokuhloswe ngawo ukuhlonipha iqhawe lomzabalazo elingasekho emhlabeni uDkt Nelson Mandela.
Lokhu kuvezwe umqondisi walo mjaho uMnuz Johan Van Staden ngoLwesibili mhla zili-15 kuNhlaba (May) nalapho kwethulwa khona lo mjaho wesi-7 kulo nyaka ngokusemthethweni eNelson Mandela Capture Site e-Howick.
Lo mjaho uhlanganisa amabanga angama-42km, 21km nangama-10km.
Kulo nyaka kulindeleke ukuthi kube khona abagijimi abalinganiselwa ku-18 000 abaphuma emhlabeni wonke nokuyisibalo esinyukile uma kuqhathaniswa nesibalo sangonyaka owedlule.
Umjaho wangalonyaka uchazwe njengowehlukile nobaluleke kakhulu njengoba kuwunyaka lapho uDkt Nelson Mandela ezobe eqeda khona iminyaka eyi-100.
Imeya yesiFunda uMgungundlovu uNkk Thobekile Maphumulo uthe akusiwo nje umjaho nje ongatheni kodwa uyinto ebalulekile njengoba kuzobe kugujwa iminyaka eyi-100 kaMandela noNkk Walter Sisulu.
Uthe lena ngenye yezindlela zokugubha nokuhlonipha lamaqhawe omzabalazo.
“Lo mjaho ukhombisa umlando nefa okuyohleli kukhona ngisho nasezizukulwaneni ezizayo. Namhlanje sikhombisa umsebenzi omkhulu nohambo oluhle oselube khona ngalomjaho. Akusiwona umsebenzi olula lona kodwa udinga, ukubekezela ukuzinikela nokusebenzisana ukuze ube yimpumelelo. Sicela abantu ukuthi baphume ngobuningi babo bezongenela baphinde beseke lomjaho,” kubeka yena.
UMnuz Van Staden unxuse abagijimi ukuba bangenele kusenesikhathi ukugwema ukuphoxeka uma sekuphele izikhala zokungenela.
UMnuz Thobani Changwe nobambe irekhodi lika: 2:27:12 kusukela ngonyaka wezi-2014 uthe kulonyaka ukulungele ukuqeda ngerekhodi elisha.
“Ngo-2015 yangishaya phansi iMandela Marathon, ngo-2016 no-2017 ngangakwazi ukugijima ngenxa yokulima kodwa kulo nyaka ngibuyile ngizokwephula irekhodi.
Ngisho lingancishiswa noma landiswe ibanga eligijinywayo okusalayo ngizonqoba,” kubeka yena.
Ukubhalisela ukungenela lo mjaho kuzovalwa ngomhla ka-31 kuNtulikazi (July) kanti umjaho wona uzoba ngenyanga kaNcwaba (August).